Nosakanana Indray Ny Firosoana Ho Amin’ny Dingan’ny Fitsapankevibahoaka , ‘Jadona!’ Hoy ny Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraMarianne Diaz Hernandez
Nandika (en) i Sara Holmes
Voadika ny 28 Oktobra 2016 5:35 GMT
“Tandremo: Angovo Mahery.” Sary: mpisera Flickr Alejandro Forero Cuervo. Nahazoana alàlana (CC BY 2.0)
Nandritra ny taona 2016, nifantoka tamin'ny mety ho famerenana indray ny fitsapankevibahoaka manohitra ny Filoha Nicolás Maduro ny fandaharam-potoana ara-politika Venezoeliana, dingana izay toa nosakanan'ny governemanta tanteraka tao anatin'ny andro vitsivitsy ary efa nandrahona imbetsaka fa tsy havela hotontosaina izany.
Feno sakatsakana ny làlana mankany amin'ny famerenana indray ny fitsapankevibahoaka . Nametraka sakana maro tamin'ny dingana ny Vaomiera Nasionalin'ny Fifidianana Venezoeliana ( CNE amin'ny teny espaniola), ary nanemotra ny fe-potoana farany ara-dalàna, sy namorona fitakiana izay tsy hita ao amin'ny lalàna akory tamin'ny voalohany. Na izany aza, nahavita nandresy lahatra ny Vaomiera Nasionalin'ny Fifidianana ihany ireo izay nitaky ny fitsapankevibahoaka mba hidirana amin'ny dingana manaraka mandritra ny herinandron'ny 24 Oktobra 2016 (nahaangona sonia 20% avy amin'ireo mpifidy) .
Na izany aza, naato tampoka tamin'ny 20 Oktobra ny fanangonan-tsonia, rehefa niaraka nivoaka ny didim-pitsaran'ny tribonaly enina, nanambara fanapahan-kevitra “mifanaraka amin'ny fepetra fitandroana” ireo manampahefan'ny fifidianana ka nampiato ilay dingana hatramin'ny fotoana tsy voafetra.
Tonga tao anatin'ny fandraisana fanapahan-kevitra samirery mampiady hevitra nataon'ny CNE hampiatoana ny fifidianam-paritra — ifidianana izay ho governora federaly — hatramin'ny taona 2017 izao toe-javatra izao, na dia voalazan'ny lalampanorenena ho tokony hotontosaina amin'ity taona ity aza izany.
Toy izao ny resaka nataon'ny mpanao gazety Alberto Rodríguez momba ireo zava-nitranga ireo:
Mila miantso ny zavatra amin'ny maha izy azy, amin'ny endriny, araka ny anarany isika.
Mazava ho azy fa misy ny didy jadona eto Venezoela.
Moa ve isika mbola mila porofo bebe kokoa?
Ao anatin'ny krizy ara-tsosialy, ara-politika sy ara-toekarena, ahitana tahan'ny herisetra sy vidim-piainana ambony indrindra eto amin'izao tontolo izao (voalaza mialoha fa hahatratra hatramin'ny 500% ny sondrobidim-piainana amin'ny faran'ny taona), sy ho fanoherana ny toe-draharaha amin'ny tsy fisian-tsakafo sy fanafody dia ny antso hanaovana fitsapankevibahoaka hanesorana ny filoha ihany lalana hitan'ny Venezoeliana maro ahafahan'ny firenena hanarina indray ny fivilian-dalan'ny andrim-panjakana sy hanangana dinam-pitantanana.
Namariparitra ilay fanapahan-kevitra fametrahana sakana hirosoana amin'ny fitsapankevibahoaka ho ” fanonganam-panjakana ” ny mpitarika ny mpanohitra sady governoran'ny fanjakana Miranda, Henrique Capriles. Mandritra izany fotoana izany, nandrisika ny mpanohana azy tao amin'ny kabariny taloha kelin'ny nanambarana ny fampiatoana sy handehanany hitety an'i Iran, Azerbaijan, Arabia Saodita, ary Qatar ny Filoha Nicolás Maduro tsy hanaiky “fifidianana hafa izay mety hanome fandresena ny vondron'olombitsy mpanankarena” .
Nanasongadina tao amin'ny sombin-dahatsoratra iray tao amin'ny gazety Washington Post ny fomba tsy nampoizin'ny ankamaroan'ny ao Venezoelà ilay fanapahan-kevitra i Francisco Toro, tonian-dahatsoratry ny tranonkalam-baovao Caracas Chronicles:
Tena nanaitra tokoa izany na dia ho an'ireo Venezoeliana efa zatra ady mafy aza. Efa nomanina ho amin'ny herinandro ny fanombohana ny fanangonan-tsonia mankany amin'ny fifidianana fanesorana. Sahirana manomana ny drafitra handresen-dahatra ny mpifidy hanao sonia ireo mpanohitra mpikatroka. Tsy misy olona, na dia ny miaramila aza, nanantena izany.
Mandritra izany fotoana izany, nanambara tao amin'ny kaonty Twitter-ny ny filohan'ny Antenimieram-pirenena, Henry Ramos Allup hoe:
Ny fitondrana demokratika manontany ny vahoakany. Ny jadona no mandositra fifidianana. Mamafa ny fitsapankevibahoaka fanesorana izy ireo, satria fitondrana jadona ny governemanta domelin'ny kolikoly.
Ho setrin'ny fampiatoana, nirongatra nandritra ny faran'ny herinandro tany amin'ny faritra samihafa tao amin'ny firenena ny hetsi-panoherana, ary nanao fivoriana manokana ny alahady 23 Octobra lasa teo ny Antenimieram-pirenena izay fehezin'ny fiaraha-mitantan'ny antoko mpanohitra. Na izany aza, najanona noho ny fidiran'ny vondrona mpanetsika politika mpomba ny fitondrana tao an-dapan'ny antenimiera ny fivorian'ny kaongresy.
Maro ny antoko tao amin'ny fiaraha-mitantan'ny mpanohitra no nangataka ny olona mba hanatevin-daharana ny tsy fankatoavan'ny sivily. Ao anatin'ity toe-draharaha ity, nantsoin'ny mpitarika politika ireo olom-pirenena mba hifantoka amin'ny olana manan-danja eo amin'ny firenena:
El problema no es ni “el hambre”, ni “el pueblo” ni la “mayoría”; es el Estado de derecho que no existe. Foco, por favor, diputados.
Tsy ny “hanoanana” no olana na “ny vahoaka” na ny “maro an'isa,” fa ny tsy fisian'ny fanjakana tan-dalàna. Mifantoha, azafady, ianareo mpanao lalàna.
Nandritra ny fotoam-pivoriana, nanapa-kevitra hanohy avy hatrany ny fanendrena ny sojabe sy ny mpitsara vaovao ao amin'ny Tribonaly Fitsarana Tampon'ny CNE ny Antenimieram-Pirenena, dingana voalohany amin'ny mety ho amelezana an'i Nicolás Maduro. Zava-dehibe ny manamarika, na izany aza, fa nanambara ny Tribonaly Fitsarana Tampony fa heverina ho tsy manan-kery ny fepetra rehetra noraisin'ny Antenimieram-pirenena .
Ahitana andian-teboka mikendry ny hamerenana amin'ny laoniny ny rafitry ny andrim-panjakana ao amin'ny firenena ny fifanarahana nankatoavin'ny Antenimieram-pirenena :
Sioka : Inona ireo fifanarahana vao neken'ny Antenimieram-pirenena aorina?
Sary: fifanarahana hamerenana amin'ny laoniny ny herin'ny lalàm-panorenana
Fanambarana ny fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana sy ny fanonganam-panjakana nataon'ny governemanta Maduro
Fangatahana ny fampiharana ny rafitra iraisam-pirenena.
Fametrahana ofisialy ny fitoriana ao amin'ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisampirenena ireo mpiasam-panjakana tompon'andraikitra amin'ny fampiatoana ny fitsapankevibahoaka fandroahana.
Firosoana avy hatrany amin'ny fanendrena ny sojabe sy ny mpisolo toerana ao amin'ny CNE.
Firosoana avy hatrany amin'ny fanendrena ireo mpitsara ao amin'ny Tribonaly Fitsarana Tampony mba hiantohana ny fahaleovantenan'ny andrim-panjakana.
Fanombohana ny dingana hamaritana ny toeran'i Maduro amin'ny maha filohan'ny Repoblika azy.
Fananganana ny vaomiera parlemantera manokana mba hanara-maso ity fifanarahana ity .
Fangatahana ny tafika tsy hankatò sy tsy hanatanteraka ny baiko hamelezana ny vahoaka Venezoeliana.
Miantso ny vahoaka Venezoelana havitrika hatrany ary vonona ny hiaro ny Lalàmpanorenana
Na dia teo aza ny fanaovana ireo dingana ireo, nisy ny olom-pirenena sasany mbola tsy faly tamin'ny zavatra noheveriny ho tsy ampy tamin'ny valintenin'ny Antenimieram-Pirenena:
Ny zavatra eken'ny olona dia ny hoe amin'izao fotoana izao inona ny zavatra tokony hitranga ao amin'ny Antenimieram-pirenena izay reny iavian'ny ady rehetra amelezana ny fitondrana. Mendrika ny hanao fanambarana hanao fotoam-pivoriana tsy manam-pitsaharana izy ireo.
Ho valin'ny fivoriana manokan'ny Antenimieram-pirenena, nanoratra i Diosdado Cabello, mpitarika mpanohana ny fitondrana sady mpanao lalàna hoe :
Nifarana ny fampisehoan'ny Antenimieram-pirenena: mbola filoha i Maduro, any amin'ny farany ambany indrindra ny fahefana mpanao lalàna, manana herintsaina sy vonon-kijoro ny Vahoaka Chavista.
Tsy noraharahian'ny antoko eo amin'ny fitondrana ny manampahefanan'ny Antenimieram-pirenena izay nandresy tamin'ny fifidianana ny taona 2015, ny antoko eo amin'ny fitondrana no mifehy ny fahefam-panjakana efatra ambiny ary nanapa-kevitra hankatoa tetibolam-panjakana taona 2017 ny herinandro lasa kanefa tsy nahazo alalana avy amin'ny mpanao lalàna.
Toa karazana lalao fanorona tapi-dalan-kaleha ny hoavy politika Venezoeliana.